musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Sierra Leone Breaking News » Vanhu vanosvika makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vafa muSierra Leone
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • Sierra Leone Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vanhu vanosvika makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vafa muSierra Leone.
Vazhinji vevafi vanonzi vanga vachiedza kutora mafuta mushure mekuita tsaona mumugwagwa.
Kuputika kwemotokari yemotokari kunokonzera kurasikirwa kukuru kwehupenyu muguta guru reSierra Leone reFreetown.
Kuputika uku kwakaitika mambakwedza eMugovera mushure mekunge tanker yarovera neimwe mota.
Pane vanhu makumi matatu vakapiswa zvakaipisisa muchipatara vasingatarisirwi kurarama.
Sekureva kwevakuru vakuru vemochari mu Sierra LeoneGuta guru, vanhu vanopfuura makumi mapfumbamwe vafa pakuputika kwetangi remafuta muFreetown mangwanani ano.
Kuputika kwerori remuFreetown kwakakonzera kufa kwevanhu vakawanda, uye vanhu 100 vachityirwa kufa.
Kuputika uku kwakaitika mambakwedza emusi weMugovera mushure mekunge tangi remafuta rabonderana neimwe motokari vanhu vaungana kuzotora mafuta aibuda.
“Vagari vakaedza kunhonga mafuta aibuda murori vakawirwa nekuputika kwakazoputika,” Meya weFreetown Yvonne Aki-Sawyerr akanyora mukutaura paFacebook, asi akazodzima chikamu ichi.
Mashoko ekuti vanhu vanga vachitora mafuta anotsigirwa nemifananidzo yevanhu vakafara vakamira vakatenderedza tangi, vamwe vakatakura zvigubhu, izvo zvinonzi zvakatorwa nguva pfupi kuputika kusati kwaputika.
Vakuru veFreetown vanoti mochari yeguta yakagamuchira mitumbi 91 zvichitevera kuputika kwakaitika pari zvino. Musoro we National Disaster Management Agency (NDMA) akati yakanga iri “tsaona yakaipa, inotyisa.”
Mumaawa mushure mechiitiko ichi, nhamba yevakafa yakataurwa nevakuru iri kuramba ichiwedzera. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaMohamed Juldeh Jalloh, vakati vanhu vanosvika makumi mapfumbamwe nevaviri vakaurayiwa mushure mekushanyira zvipatara zviviri zvakagamuchira vanhu.
Imwe yakazogadziridzwa yakazogadziridza kusvika pamakumi mapfumbamwe nemashanu. Mutevedzeri wegurukota rezvehutano akazoisa nhamba yevakafa pa95.
Sekureva kwevashandi vepachipatara cheConnaught, pakanga paine vanhu makumi matatu vakapiswa zvakaipisisa avo vaisatarisirwa kurarama.
Mumiriri Mukuru Junisa Precious Gbeteh Sallu Kallon - GGA inobatana mukubatana mazana emweya yakarasika pakuputika kwemafuta ePMB Wellington kumabvazuva kweguta rangu randinoda - Freetown, Sierra Leone.
Mhinduro kubva kuSierra Leone
I #blackfriday yaJunisa Precious Gbeteh Sallu Kallon, pachangu saJunisa Precious Sallu Kallon akadzidza kurasikirwa nezvivakwa uye nehupenyu hweshamwari dzepedyo nehama dziri kure pakati pevazhinji vakarasikirwa nehupenyu nekuputika kwe40ft-refu tangi remafuta.
Izuva rakakosha uye svondo rinofanirwa kutyisa nhoroondo yedu seFreetonian nekusingaperi. Sezvandakadzidza kubva kuFreetown City Council tine 92 vakakuvara (48 paConnaught Hospital, 6 paChoitrams Hospital, 20 pa34 Military Hospital, 18 paEmergency Hospital); tarasikirwa neimwe mweya makumi mapfumbamwe nemina paConnaught mortuary; zvingangove zvitunha 94 zvichiri panzvimbo yekuputika.
Junisa Precious Sallu Kallon anoda kutenda mhinduro yekukurumidzira yeMetropolitan Police uye Mutevedzeri weMeya uye Freetown City Council, Hurumende Yese yeSierra Leone kunyanya National Disaster Management Agency - Sierra Leone (NDMA), ari kutungamira mhinduro.
Alain St. Ange, purezidhendi weAfrican Tourism Board akataura kuti: “Tinonzwira urombo zvikuru vanhu nehurumende yeSierra Leone paiyi njodzi yenyika.”